पेपरलेस र फेसलेस भन्सार- विचार - कान्तिपुर समाचार
माघ १३, २०७७ सुमन दाहाल
लकडाउनका बेला नेपालको भन्सार प्रशासनले मालवस्तुको शीघ्र जाँचपासका लागि गरेको योगदान र आपूर्ति प्रणालीमा निरन्तरता ल्याउन प्रयास गर्‍यो । कोरोना संक्रमण रोक्न तर्जुमा गरेको निःसंक्रमण विधिले मुलुकभित्र मात्र नभएर सार्कस्तरीय भन्सार प्रशासनहरूको समूहले समेत हाम्रो सराहना गरेको छ ।
नेपालको भन्सार प्रशासनले जाँचपाससँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने करिब चालीस निकायका कामकारबाहीलाई आसिकुडा वर्ल्डजस्तो विश्वस्तरको सफ्टवेयरमार्फत सूचना प्रणालीमा आबद्ध गरिसकेको छ । भन्सार प्रशासनसँग जोड्ने गरी यसै अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस (२६ जनवरी) देखि भन्सार विभागले नेपाल एकद्वार प्रणालीको पनि सुरुआत गर्दै छ । एकद्वार प्रणालीले मालवस्तु पैठारीकर्ता वा निकासीकर्तालाई अनलाइन आवेदनबाटै अनुमति वा लाइसेन्स पाउने र त्यसलाई अनलाइनमार्फतै भन्सारमा पेस गर्ने सुविधा दिन्छ । यसबाट समय मात्र नभई लागत पनि घट्छ, व्यापारी–कर्मचारी भेटघाटको अन्त्य हुन्छ, कामकारबाही पारदर्शी हुन्छ र वैदेशिक व्यापार अनुमानयोग्य बन्छ । समग्रमा यो प्रणालीबाट भन्सार पेपरलेस र फेसलेस हुन्छ । यस्ता थुप्रै विशेषताका कारण एकद्वार प्रणालीको सुरुआतपछि हाम्रो व्यापारको लागतमा झन्डै १५ प्रतिशत कटौती हुने अनुमान छ ।
भन्सार प्रशासनका मुख्य तीन काम छन्—राजस्व संकलन, व्यापार सहजीकरण र सामाजिक हितको संरक्षण । कुल राष्ट्रिय लक्ष्यको करिब ४५ प्रतिशत राजस्व संकलनको जिम्मेवारी भन्सार प्रशासनको हुन्छ । पुस मसान्तसम्म यो लक्ष्यको करिब ९० प्रतिशत राजस्व संकलन भइसकेको छ । लकडाउनका कारण बजार, कलकारखाना तथा विकास–निर्माणका कामहरू ठप्प हुँदा पैठारीमा कमी आएर राजस्व संकलन अपेक्षित हुन सकेन । मंसिरदेखि भने व्यापारले लय पक्रिएको छ । अबका दिनमा पैठारी बढ्ने र सोही अनुपातमा राजस्व संकलनको उपर्युक्त लक्ष्य सहजै हासिल हुने अनुमान छ ।
भन्सार प्रशासनले व्यापारमा लाग्ने समय र लागत कम गर्न प्रयास गरिरहेको छ । यसै वर्षदेखि छुट्टै वर्गीकरण शाखा गठन गरिएको छ, आफ्नै अत्याधुनिक प्रयोगशालाहरूमार्फत मालवस्तु पहिचानलाई तीव्रता दिएको छ, वस्तु वर्गीकरण तथा उत्पत्ति मुलुकबारे पूर्वादेश दिने प्रणाली थालेको छ । यसबाट मालवस्तु वर्गीकरणमा पैठारीकर्ताहरूको द्विविधा हटेको छ । यसै वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको आसिकुडा प्रणालीबाट मालवस्तुको मूल्यांकनमा आधार र कारण खुलाउन मद्दत मिलेको छ, मालवस्तुको म्ल्यूांकन अझ पारदर्शी भएको छ ।
विभागले मालवस्तुको म्ल्यूांकनका लागि उपयोगी ट्यारिफ स्पेसिफिक कोडसमेत विकास गरिरहेको छ । व्यापारको सहजीकरणकै लागि भन्सार प्रशासनले पूर्वाधार विकास गरिरहेको छ । यसै वर्षदेखि विराटनगरमा पनि एकीकृत जाँच चौकीको सुरुआत भएको छ । वीरगन्जसहित दुईवटा एकीकृत जाँच चौकी र तातोपानी, सिर्सिया तथा काँकरभिट्टाका सुक्खा बन्दरगाहहरूसमेत गर्दा कुल व्यापारको झन्डै ७० प्रतिशत यस्तै अत्याधुनिक भन्सार भौतिक पूर्वाधारहरूमार्फत हुन थालेको छ ।
सामाजिक हित संरक्षणका लागि भन्सार प्रशासनले स्वयं तथा अन्य निकायको सहयोगमा अवैध व्यापारको नियन्त्रण र प्रतिबन्धित एवं समाजलाई हानि पुर्‍याउने मालवस्तुहरूको पैठारीमा निषेध गर्दै आएको छ । सीमामा रहेका सबै सरोकारवाला निकायसँग समन्वयमा रही राजस्व चुहावट तथा चोरी निकासी नियन्त्रणमा काम गरिरहेको छ । आकस्मिक तथा अत्यावश्यक मालवस्तुहरूको निकासी–पैठारीका लागि भन्सार प्रशासनले पूर्वसक्रियताका साथ काम गरिरहेको छ । कोरोना संक्रमणबाट विश्व नै आक्रान्त भइरहँदा पनि हामी भन्सारकर्मीहरू भने जिम्मेवारीमा नियमित र निरन्तर प्रतिबद्ध रह्यौं ।
कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण धेरै निकाय बन्दप्रायः रहँदा भन्सार कार्यालयहरू भने सधैं पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आइरहे । त्यसबीच हाम्रा भन्सारकर्मीहरूलाई कोरोनाको संक्रमण देखियो, हामी डरायौं पनि तर आत्तिएनौं । हामीले कर्मचारी र मालवस्तुको सुरक्षाका लागि निःसंक्रमण गर्ने विधि सम्भवतः मुलुककै कुनै पनि निकायले भन्दा पहिले निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्‍यौं । पछि उक्त विधिलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि अनुमोदन गर्‍यो । हामीले जाँचपासलाई छिटोछरितो र सहज बनाउनका लागि उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा र्‍यापिड एक्सन टिम बनायौं । मालवस्तुहरूको प्रकृतिका आधारमा द्रुत जाँचपासको विधि बनायौं । सड्ने–गल्ने तथा औषधिजन्य मालवस्तुहरूको जाँचपास दुई घण्टाभित्रै गर्ने चाँजो मिलायौं । कम जोखिमयुक्त मालवस्तुहरूको ठूलो हिस्सालाई हामीले हरियो लेनबाट शीघ्र जाँचपास गर्न सकिने व्यवस्था प्रणालीबाटै मिलायौं । कर्मचारीहरूलाई स्वास्थ्यका आवश्यक सबै उपकरणको व्यवस्था मिलाउँदै दिनदिन र छिनछिनमा सम्पर्क स्थापना गरी सूचना आदानप्रदान गर्न सामाजिक सञ्जालका समूहहरू सक्रिय तुल्यायौं ।
कुनै पनि कानुन शून्यतामा कार्यान्वयन हुँदै । त्यसका लागि सरोकारवाला सबै पक्षको उत्तिकै सहभागिता र सम्मति आवश्यक पर्छ । सीमामा भन्सार प्रशासनले दर्जनौं निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरिरहनुपरेको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा पर्याप्त समन्वय हुन नसक्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेका उदाहरणहरू छन् ।
धेरै देशमा सीमामा रहेका सबै सरोकारवाला निकाय भन्सारकै छानामुनि भन्सारकै पदसोपानमा रहेर काम गर्छन् । फलस्वरूप समन्वयमा प्रभावकारिता आएको पाइन्छ, जुन हामीले गर्न बाँकी छ । खुला सिमानाका कारण हुन सक्ने अवैध व्यापारको नियन्त्रण भन्सार प्रशासनले मात्र गर्न सक्दैन । यसका लागि सम्बन्धित स्थानीयस्तरमा रहेका सबै सरोकारवाला निकायको समन्वयात्मक पहल जरुरी छ । भन्सार कानुनको परिपालनाका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रका अतिरिक्त आमनागरिकले पनि जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रकाशित : माघ १३, २०७७ ०८:१५
कोही व्यक्ति सोसल मिडियामा खुसी देखिनुले ऊ वास्तविक जीवनमा पनि खुसी नै छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन ।
माघ १३, २०७७ लीना दुवाडी
ठाउँअनुसार केही हदसम्म प्रविधि र प्रणाली फरक होला, तर फेसबुक वा इन्स्टाग्राममा फोटो हेरेकै भरमा अमेरिकालाई स्वर्ग देख्नु र आफ्नो देशमा केही छैन भन्ने दृष्टिकोण बनाउनु सायद इन्टरनेटको आविष्कारले मानवलाई दिएको एउटा अनावश्यक उपहार हो ।
सोसल मिडियाको क्रान्तिले हाम्रो जीवनलाई सोचेभन्दा निकै सहज र रमाइलो पक्कै बनाइदिएको छ । हामी हाम्रा दैनिकीलाई साथीभाइ र फलोवरसँग साझा गरिरहेका हुन्छौं । अरूको जीवनलाई नियालिरहेका हुन्छौं र फोनको स्क्रिनमार्फत दुनियाँ चहारिरहेका हुन्छौं । हाम्रो जीवन अहिले खुला किताबजस्तै भएको छ । कुन मानिस कस्तो छ भनेर जान्न अहिले उसको सोसल मिडिया प्रोफाइल हेर्ने गरिन्छ । कतिपय ‘जब रिक्रुटर’ ले व्यक्तिको बायोडाटाभन्दा पहिले उसको सोसल मिडिया जाँच्ने गर्छन् ।
आफूलाई सहज लाग्ने व्यक्तिगत कुरा आफ्नो नेटवर्कमा साझा गर्नु गलत होइन । अरूबारे जानकारी लिनु पनि नराम्रो होइन । तर, सोसल मिडियामा अरूका रहनसहन, जीवनशैलीलाई आफ्नोसँग तुलना गरेर अचेतन/अवचेतन मनमा उत्पन्न हुने ईर्ष्या र त्यसले जन्माउने चिन्ता एवम् उदासीले आफूलाई कति असर गरिरहेको छ भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जानु अत्यावश्यक छ ।
अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लेओन फेस्टिंगरले सन् १९५४ मा सामाजिक तुलनाको सिद्धान्त विकास गरेका थिए । उनका अनुसार मानिस आफ्नो उन्नति/प्रगतिको निर्धारण अरूको जीवनसँग दाँजेर गर्न चाहन्छ । सामाजिक तुलना मानव विकासको एउटा प्राकृतिक अवयव नै हो । करिब छ–सात वर्षको उमेरदेखि नै व्यक्तिले आफूलाई अरूसँग तुलना गर्न थाल्छ । समयानुसार तुलनाको प्रकृति बदलिँदै जान्छ । पहिलेपहिले छरछिमेक, स्कुल–कलेज, अफिसमा सीमित हुने सामाजिक तुलनाको स्वरूप सोसल मिडिया फस्टाएसँगै भयावह भएको छ ।
हामी हरेक दिन घण्टौं बिताएर इन्टरनेटमा आफूलाई अरूसँग तुलना गर्छौं । तर हामीले आफूसँग तुलना गरिरहेका मानिसहरू को हुन् र उनीहरू वास्तविक जीवनमा कस्ता छन् भन्ने कमै मात्र जानकारी पाएका हुन्छौं । हामीलाई ती व्यक्तिको पारिवारिक पृष्ठभूमि र उनीहरूले गरेका मिहिनेतबारे पनि जानकारी कमै हुन सक्छ । तर हामी उनीहरूको पृष्ठभूमि नबुझी उनीहरूको सफलतालाई मात्र हेर्छौं र दुःखी हुन्छौं ।
एक छिन तपाईं आफ्नै फेसबुक नियाल्नुस्, आधाजति व्यक्तिहरू व्यावसायिक हिसाबले तपाईंभन्दा सफल होलान् । उनीहरूको फ्रेन्ड्स लिस्ट लामो होला, फलोवर बढी देखिएलान् । तिनका पोस्टमा लाइक र कमेन्ट धेरै आउलान् । तर सायद यहाँसम्म आइपुग्न तिनीहरूले त्यसै अनुसारको मिहिनेत र समय पनि खर्चिए कि ? अब फेसबुकका अरू साथीलाई हेर्नुस् । आधाजति व्यक्तिभन्दा तपाईं सफल हुनुहोला । तपाईंले आफ्नो करिअरलाई गम्भीर रूपले लिनुभयो होला । सिक्ने–सिकाउने कुरामा कन्जुस्याइँ गर्नुभएन होला, त्यसैले त तपाईं ती व्यक्तिभन्दा सफल हुनुहुन्छ । त्यसैका आधारमा तपाईंका सोसल मिडियामा प्रतिक्रिया पनि आइरहेका होलान् ।
तपाईंले इन्स्टाग्राममा देख्ने कैयौं व्यक्ति शारीरिक बनोट र सुन्दरतामा तपाईंभन्दा अगाडि होलान् । तिनका सेल्फी मनमोहक देखिएलान् । ती पोस्टहरूमा लाइक र कमेन्ट पनि टन्नै हुन सक्छन् । तिनलाई जस्तो लुगा पनि सुहाउँछ र तिनका फलोवर तपाईंका भन्दा धेरै छन् ।
तर तपाईंलाई थाहा छ, आफ्नो शरीरलाई फिट राख्न उनीहरू कतिपटक जिम जान्छन् ? शारीरिक अभ्यास गर्छन् वा स्वस्थ जीवनशैली अपनाउँछन् ? त्योभन्दा पनि प्रमुख कुरा, एउटा सुन्दर सेल्फीका लागि बीसवटा सेल्फी खिच्छन् र आधा घण्टा लगाएर त्यसमा फिल्टर प्रयोग गर्छन् । तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ, इन्स्टाग्रामका थुप्रै मानिसभन्दा शारीरिक बनोट र सुन्दरताका हिसाबले तपाईं धेरै राम्रो हुन पनि सक्नुहुन्छ ?
सोसल मिडियामा तपाईंले फलो गर्ने कैयौं व्यक्ति दिनहुँजसो आफ्ना पति/पत्नी/पार्टनर वा बालबच्चासँग खिचिएका फोटो सेयर गर्छन् । तिनमा उनीहरू निकै खुसी देखिन्छन् । तिनको जीवन ‘पर्फेक्ट’ देखिन्छ । फेसबुकमा हेर्दा तिनका भान्सामा सधैं मीठामीठा खाना मात्र पाक्छन् । ती फोटा र टिकटक देखेर तपाईंलाई ‘आफ्नो जीवन पनि त्यस्तै भएदेखि !’ भन्ने पक्कै लाग्छ । तर के उनीहरूको जीवन तपाईंले सोचेजस्तै पूर्ण छ कि सोसल मिडियाका भित्ताहरूमा मात्र ?
बिहान उठ्नेबित्तिकै फेसबुक/इन्स्टाग्राम खोल्दा कसै न कसैको बर्थडे, म्यारिज एनिभर्सरीका पार्टीका फोटाले तपाईंको अटेन्सन कुरिरहेका हुन्छन् । महामारीका बेला तपाईं भने घरमै बस्ने, कहीँ–कतै नजाने, भोजभतेर नगर्ने तर अरूले कोरोना भन्ने कुन चराको नाम हो भनेझैं पार्टी गरेको देख्दा तपाईं भित्रभित्रै मुरमुरिनुहुन्छ होला । अचेतन/अवचेतन मनमा डाह र आक्रोश भरिन्छ होला । तर एक छिन विचार गर्नुस् त, तपाईंले गर्ने विकेन्ड गेट टुगेदरका फोटा हेरेर तपाईंका कैयौं साथीहरू ठ्याक्कै त्यस्तै पो सोचिरहेका छन् कि ?
प्रकाशित : माघ १३, २०७७ ०८:१०